Iray Andro Tsy Nisy Fahitalavitra · Global Voices teny Malagasy
Indonezia nolazaina fa azo ijerena antsika ihany koa
Voadika ny 11 Oktobra 2017 7:08 GMT
Afaka miaina indray andro tsy misy fahitalavitra ve isika? Bilaogera Indoneziana maro no indray namoaka sombin-dahatsoratra tao anatin'ny iray andro ho fahatsiarovana ny Androm-pirenena Ho An'ny Ankizy tamin'ny 23 Jolay.
Maro tamin'izy ireo no miahiahy ny kalitaon'ny fandaharana amin'ny televiziona Indoneziana izay hitan'izy ireo ho toy ny loza mitatao ho an'ny famoronan'ny ankizy indrindra indrindra raha avy amin'ny fomba fahaizana fijery kalitao.
Anisan'ireo bilaogera Indoneziana izay mandrisika ny tsirairay mba hitsahatra hijery ny fandaharana amin'ny fahitalavitra i Lita Mariana tao amin'ny Banana Talk, i Priyadi, i Triaji, i Solyaris, ary i Bocah Cilik mba ho fanajana ny ankizy sy hanairana ny fantsona fahitalavitra Indoneziana momba ny fandaharan'izy ireo izay mety hanimba ny ankizy amin'ny fomba maro.
Avy amin'ny Kidia ity fanentanana “andro iray tsy misy fahitalavitra” ity, vavahadim-baovao natokana ho an'ny fanabeazana ny ankizy manokana.
Tena manohana tanteraka ny fanentanana toy izany i Lita Mariana. Amin'ny maha-renim-pianakavian'ny zaza roa azy, dia tena sahiran-tsaina izy amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra maro izay heveriny fa mety hampidi-doza amin'ny fitondran-tenan'ny ankizy any aoriana.
Inona àry ny tanjon'ny fanentanana toy izany rehefa fantatr'izy ireo fa niantefa tany amin'ny mpamokatra fahitalavitra Indoneziana mamono sofina ny feon'izy ireo raha toa ka tsy misy ny lalàna miaraka amin'izany? Eto ny fanehoan-kevitra izay milaza amintsika ny antony.
Hoy i Rendy AK
Tsy momba ny fanoherana fahitalavitra akory izany amin'ny maha teknolojia azy. Fa tena feno fampisehoana herisetra sy zavatra tsy misy dikany fotsiny amin'ny fahitalavitra (Indonezianina). Tsy fangatahana volavolan-dalàna mba hahatonga ny fahitalavitra tsy ho ara-dalàna no resaka eto, fa ny mba ho fanehoana fanajana fotsiny ny Androm-pirenena Ho An'ny Ankizy.
Efa fantatsika rehetra fa tsy tsara ho an'ny ankizy mihitsy ny fandaharan'ny fahitalavitra Indoneziana. Satria dia mandany fotoana bebe kokoa eo amin'ny fahitalavitra noho ny amin'ny zavatra hafa ny ankizy Indoneziana .
Manome fanehoan-kevitra mahaliana ao amin'ny lahatsoratra ao amin'ny Banana Talk i Masindi momba ny hoe nahoana no mahasoa anao ny tsy fijerena fahitalavitra :
Niaina tam-pifaliana tsy nisy fahitalavitra izahay efa taona maro lasa izay:
Vakio eto: “Mifaly Amin'ny Fiainana Ao An-trano Tsy Misy Fahitalavitra“
- Namaky boky bebe maro kokoa izahay.
– Nahazo fialamboly bebe kokoa ny vahiny (tena nanana resadresaka manan-danja isika ary nilalao zavamaneno).
– Nanao firaisana matetika kokoa izahay.
– Nanandrana manao sakafo mahaliana kokoa isika.
-Ankehitriny, manana ny fotoana rehetra eran'izao tontolo izao isika mba hikarakarana an'i Noe.